Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo telfoonka kula hadlaya jaalaiyadda Soomaaliyeed ee Suudaan(Sawirro) - Somalia Focus
14,March,2017(SofoNews) Munaasabadani oo lagu taageerayaya madaxda dowladda Soomaaliya islamarkaana looga hadlayay gurmadka abaaraha ayaa ka dhacday Magaalada Khaartuun ee Caasimada dalka Sudan.
Xafladaas ayaa waxaa qadka telfoonka uga qeybgalay raiisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayado sidoo kale ay kasoo qayb galeen Diblumaasiyiin ka socday Safaaradda Soomaaliya ee Dalka Suudaan oo ay ka mid ahaayeen Lataliyaha koowaad Abukar Boston, Fiidow Maxamuud Fiidow Uqaybsanaha Warfaafinta iyo Agaasimaha Waaxda Baasaboorada ee Safaaradda Cabdulaahi Sheekh Cabdisamad Ibraahin.
Xafladda inta ay socotay ayaa waxaa ka hadlay Xoghaya Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Dalka Suudaan Cabdiwali Xasan Xuseen Fadiilatu isagoo sheegay in wadankii horumar wayn ku tilaabsaday isla markaana la gaaray xiligii ay wadanka horkacayeen raggii loo baahnaa.
Raysul Wasaaraha oo qatka telefoonka ugala hadlay dadwaynihii halkaas joogay ayaa uga mahadceliyay is xilqaanka iyo taageerada ay u muujiyeen Soomaalida Suudaan ku dhaqan, midaas uu raysul wasaaraha ku tilmaamay in ay tahay taageeridda dimuqaraadiyad iyo isxisaabid toos ah oo wadanka ka curatay.
Wuxuu raiisul wasaaruhu ka codsaday bulshada Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan in ay ka qeybqaataan u gurmashada dadka ay abaaruhu saameeyeen.